Khulisa Imizamo Yakho Yokuthengisa Yango-2022 Ngokuphathwa Kwemvume | Martech Zone
Unyaka ka-2021 ubungalindelekile njengonyaka ka-2020, njengoba inqwaba yezinkinga ezintsha ziyinselele abathengisi bezitolo. Abakhangisi bazodinga ukuhlala beshesha futhi besabela ezinseleleni ezindala nezintsha kuyilapho bezama ukwenza okwengeziwe ngokuncane.
I-COVID-19 yashintsha ngendlela engenakuhlehliswa indlela abantu abathola ngayo nabathenga ngayo - manje yengeza amandla ahlanganisayo okuhluka kwe-Omicron, ukuphazamiseka kwe-supply chain kanye nomuzwa oshintshashintshayo wabathengi kuphazili esivele iyindida. Abathengisi abafuna ukuthwebula isidingo se-pent-up bazivumelanisa nezimo ngokushintsha isikhathi semikhankaso yabo yokumaketha, behlisa isabelomali sezikhangiso ngenxa yezinselele zokuhlinzeka, ukuqhela ekusunguleni okuqondene nomkhiqizo futhi bamukele ithoni “engathathi hlangothi kodwa enethemba”.
Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi abathengisi bacabange ngokucindezela ukuthumela kuma-imeyili abo noma imikhankaso yombhalo elandelayo, badinga ukwenza isiqiniseko sokuthi balandela izinqubo ezihamba phambili kwezokuxhumana kwamakhasimende kanye nemithetho yokuphatha imvume.
Kuyini Ukuphathwa Kwemvume?
Ukuphathwa kwemvume kuyindlela esetshenziselwa ukwenza ngokuzenzakalelayo umkhuba wakho wokuqoqa imvume, okwenza kube lula ukwakha ukwethembana, ukugqugquzela amakhasimende ukuthi akhethe ukungena futhi agcine ukuthobelana nemibandela yemvume yawo.
Kungani Kubalulekile Ukuphathwa Kwemvume?
A inkundla yokuphatha imvume (CMP) iyithuluzi eliqinisekisa ukuthobela kwenkampani imithetho yemvume yokuxhumana efanele, njenge I-GDPR futhi I-TCPA. I-CMP iyithuluzi izinkampani noma abashicileli abangalisebenzisa ukuqoqa imvume yabathengi. Kuyasiza futhi ngokuphatha idatha nokwabelana ngayo nabahlinzeki besevisi yombhalo kanye ne-imeyili. Kuwebhusayithi enezinkulungwane zezivakashi zansuku zonke noma inkampani ethumela amashumi ezinkulungwane zama-imeyili noma imilayezo yombhalo ngenyanga, ukusebenzisa i-CMP kwenza kube lula ukuqoqa izimvume ngokwenza inqubo ngokuzenzakalela. Lokho kuyenza ibe indlela esebenza kahle futhi engabizi kakhulu yokuhlala uthobela futhi kusiza ukugcina imigqa yokuxhumana ivulekile.
Kubaluleke kakhulu ukuthi abakhangisi basebenze nozakwethu abathembekile abasebenza ngokukhethekile ekuxazululeni izimvume zokuphatha, ikakhulukazi ukwakha nokukhulisa inkundla ecabangela imithetho yazo zonke izindawo ezifanele, okuhlanganisa i-United States, Canada, EU nokunye. Ukuba nesistimu enjalo kunciphisa ubungozi bokwephula imithetho yedatha yanoma yiliphi izwe noma indawo lapho inkampani yakho inamathuba namakhasimende. Izinkundla ezithuthukisiwe zanamuhla zakhiwe ngokuhambisana nokudizayina, okuqinisekisa ukuthi njengoba imithetho ishintsha futhi ishintsha, kanjalo nokuthobelana kokuphathwa kwemvume efanele komkhiqizo.
Ukuphatha imvume efanele nakho kubalulekile uma kubhekwa inguquko ekusetshenzisweni kwedatha yekhukhi yenkampani yangaphandle kanye nokuqoqa idatha yomuntu wokuqala ngokuqondile kubathengi.
Ukuqhela Kudatha Yenkampani Yangaphandle
Sekunesikhathi kunempi elwayo ngenxa yelungelo lomuntu lokuthola ubumfihlo bedatha. Ngaphezu kwalokho, kukhona indida yobumfihlo/ukwenza umuntu ekhona. Lokhu kubhekisela eqinisweni lokuthi abathengi bafuna ubumfihlo bedatha kanye nokwazi ukuthi idatha yabo iphephile. Nokho, ngesikhathi esifanayo, siphila emhlabeni wedijithali futhi abantu abaningi bazizwa begajwe yiyo yonke imilayezo eza kubo nsuku zonke. Ngakho-ke, bafuna ukuthi imilayezo ibe ngeyakho futhi ifaneleke futhi babe nokulindela ukuthi amabhizinisi azohlinzeka ngolwazi oluhle lwamakhasimende kubo.
Ngenxa yalokho, kube noshintsho olubalulekile endleleni izinkampani eziqoqa ngayo nokusebenzisa idatha yomuntu siqu. Izinkampani nabakhangisi manje sebegxile ekwamukeleni ukuqoqwa kwedatha yenkampani yokuqala. Lolu hlobo lwedatha luwulwazi ikhasimende elabelana ngalo ngokukhululekile nangenhloso nebhrendi elilethembayo. Kungabandakanya imininingwane yomuntu siqu efana nezintandokazi, impendulo, ulwazi lwephrofayela, izintshisekelo, imvume, kanye nenhloso yokuthenga.
Njengoba izinkampani zigcina isimo sokukhanyela mayelana nokuthi kungani ziqoqa lolu hlobo lwedatha futhi zinikeza amakhasimende inani njengembuyiselo yokwabelana ngedatha yawo, zithola ukwethenjwa okwengeziwe kumakhasimende azo. Lokhu kukhulisa ukuzimisela kwabo ukwabelana ngedatha eyengeziwe nokungena ekwamukeleni ukuxhumana okufanele okuvela kumkhiqizo.
Enye indlela izinkampani ezikhulisa ngayo ukwethembana kumakhasimende iwukubagcina benolwazi mayelana nokuhlinzekwa kanye nezibuyekezo zempahla emikhiqizweni abathanda ukuyithenga. Le ngxoxo esobala emayelana nezibuyekezo zokuthumela isiza ukuphatha okulindelekile ekulethweni, noma nokubambezeleka kokuthunyelwa.
Ukuhlelela Impumelelo Yokumaketha yango-2022
Ukugxila kulawa maqhinga kubalulekile hhayi kuphela ekulawuleni umjikelezo wokuthenga ovamile, kodwa futhi nasekuhleleleni imisebenzi yokuthengisa ka-2022 kanye nokwandiswa kwe-mar-tech. Ikota yesine imvamisa isikhathi lapho izinkampani zihlangana namathimba azo ezentengiso ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukuxhumana kuhamba ngendlela futhi kuhlonzwe amasu onyaka ozayo ukuze kuthuthukiswe ulwazi lwamakhasimende, andise imali engenayo kanye nokugcina imigudu yokuxhumana ivulekile.
Ngokucabangela lezi zinyathelo, wena kanye nomkhiqizo wakho niqinisekile ukuthi nizoba yisinyathelo ngaphambi komncintiswano wokuqala ka-2022!
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe ku-PossibleNOW's inkundla yokuphatha imvume:
Cela idemo ye-PossibleNOW
Tags: CMPukuphathwa kwemvumeinkundla yokuphatha imvumeisofthiwe yokuphatha imvumeubumfihlo babathengiamakhukhiamakhukhi eqembu lokuqalakungenzeka manjeimithethonquboamakhukhi e-zero party